Thwebula Nmap 7.01 – Vessoft
Nmap – isofthiwe enamandla ukucwaninga ukuvikelwa amanethiwekhi computer. Nmap isekela izinhlobo ezahlukene scan, ezifana TCP, UDP, syn, ICMP, fin, FTP proxy, Ack njll Isofthiwe ikuvumela ukuba ihlole emachwebeni futhi ahlole ukulondeka inethiwekhi bonke ubukhulu noma yinkimbinkimbi. Nmap kwenza ukuqhathanisa imiphumela scan kanye isicelo aphethe ehlunga. Isofthiwe isikhombikubona enobungane futhi likuvumela ukuphatha usebenzisa umugqa wemiyalo.
Ukuvikelwa amanethiwekhi computer
Ukusekela for izinhlobo ezahlukene scan
Management ngokusebenzisa umugqa wemiyalo
Ukuqhathanisa imiphumela ukuskena
Amazwana on Nmap:
Nmap Ahlobene software: